ကျွန်တော်တို့အလုပ်တွေကို AI တွေ ခိုးယူသွားနိုင်သလား? - Sales Training Programs by Charisma
ကျွန်တော်တို့အလုပ်တွေကို AI တွေ ခိုးယူသွားနိုင်သလား?
ကျွန်တော်ဟာ အရောင်းသမားတစ်ယောက်ပါ။ Tech geek တစ်ယောက် မဟုတ်ပါဘူး ဒါပေမယ့် လူငယ်တစ်ယောက်ပီပီ AI (Artificial Intelligence) လို့ခေါ်တဲ့ နည်းပညာကို တော်တော်ကြီးကို စိတ်ဝင်စားပါတယ် (ငယ်ငယ်တုန်းက ကြည့်ဖူးတဲ့ Artificial Intelligence, Will Smith သရုပ်ဆောင်ထားတဲ့ iRobot နဲ့ Terminator လို ကားတွေရဲ့ လွှမ်းမိုးမှုတွေကြောင့်လည်းပါတယ်)
AI ဆိုတာကတော့ လူ့တစ်ယောက်ရဲ့ ဦးနှောက်က တွေးသလို လိုက်တွေးနိုင်တဲ့ ကွန်ပျူတာ နည်းပညာတစ်ခုပါပဲ။ ကျွန်တော်တို့ နေ့စဉ်ဘဝတွေထဲမှာလည်း AI နည်းပညာရောက်နေပြီလို့ပြောရင် မအံ့သြသွားပါနဲ့။ အနီးစပ်ဆုံးနဲ့ အထင်ရှားဆုံး ဥပမာပေးရရင် Apple’s Personal Assistant, Siri ပါပဲ။ နောက် Amazon.com & Netflix တို့လည်း AI နည်းပညာကို သုံးထားတဲ့အထဲမှာ ထင်ရှားပါတယ်။
AI နည်းပညာ အရမ်းကို ဖွံဖြိုးတိုးတက်လာရင် လူတွေ အလုပ်လုပ်တဲ့နေရာမှာ AI program သွင်းထားတဲ့ စက်ရုပ်တွေ အစားထိုးလာကြလိမ့်မယ်လို့လည်း ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ခန့်မှန်းပြောဆိုနေကြတယ်။
ဒါပေမယ့်လည်း AI နဲ့ ပတ်သက်ရင် ထိတ်ထိတ်ကြဲ လူတချို့ကတောင် သတိပေးပြောဆိုမှုတွေ ရှိခဲ့သလို ထောက်ခံပြောဆိုမှုတွေကိုလည်း တွေ့ရပါတယ်။
၂၁ရာစုနှစ်ရဲ့ အတော်ဆုံး ရူပဗေဒပညာရှင်ဖြစ်တဲ့ စတီဖင်ဟော့ကင်းလို လူကတောင် AI တွေ ဖွံဖြိုးတိုးတက်လာရင် လူသားတွေ မျိုးသုဉ်းပျောက်ကွယ်သွားနိုင်တယ်လို့ ပြောခဲ့ဖူးသလို PayPal ကို တီထွင်ခဲ့ပြီး Telsa Motor & Space X တို့ရဲ့ ပဲ့ကိုင်ရှင် Elon Mask နဲ့ Bill Gates တို့ဟာလည်း AI ကို Devil in disguise (ဘီလူးခေါင်းနဲ့ မင်းသားလေး – ထွန်းအိန္ဒြာဗိုလ်သီချင်းမဟုတ်) လို့ သုံးသပ်မှုတွေ ရှိခဲ့ပါတယ်။
AI robot တွေဟာ ကျွန်တော်တို့ အလုပ်တွေကို ဝင်လုပ်လာနိုင်သလား?
ဟုတ်ကဲ့….လုံးဝကို ဖြစ်နိုင်ပါတယ်လို့ ပြောချင်ပါတယ်။
လတ်တလောစဉ်းစားမိသလောက်ပြောရရင် AI တွေဟာ အလုပ်ကြိုးစားပါတယ်၊ ကွန်ပျူတာစက်ရုပ်တွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် coffee break, tea break ဘာညာ မလိုအပ်ပါဘူး၊ အလုပ်ရှင်တွေဖက်ကကြည့်ရင် turnover cost တွေ အများကြီးကို လျှော့ချနိုင်ပါလိမ့်မယ် (အဲဒီ့အစား maintenance cost တော့ရှိလာနိုင်ပါတယ်)၊ လုပ်ငန်းခွင်တွင်း လူအချင်းချင်း ဆက်ဆံတဲ့အခါ ခံစားချက်တွေ၊ bias ဘက်လိုက်မှုတွေကြောင့် ပြဿနာရှိနိုင်ပေမယ့် AI တွေမှာ ဒါမျိုးမရှိဘူး၊ ဒါ့အပြင် problem solving skill နဲ့ productivity (အလုပ်လုပ်နိုင်စွမ်း)မှာလည်း လူသားတွေထက် အပြတ်အသက်သာတယ်။
ဒီလိုဆို ဘယ်လိုအလုပ်တွေက AI နည်းပညာကြောင့် ရာခိုင်နှုန်းဘယ်လောက်ထိ ခြိမ်းခြောက်ခံနေရသလဲ???
Accountant စာရင်းကိုင် – 94% risk ( ကိန်းဂဏန်းတွေနဲ့ ပတ်သက်ရင် ကွန်ပျူတာက ပိုတိကျနိုင်လို့ 94% ထိ အစားထိုးလာနိုင်ခြေ ရှိပါတယ်)
Truck Driver – 79% risk ( လူသားမှားယွင်းမှုကြောင့် ဖြစ်လာနိုင်တဲ့ accident တွေကို ဖယ်ရှားနိုင်ဖို့ automation နဲ့ ပရိုဂရမ်သွင်းထားတဲ့ မောင်းသူမဲ့ မော်တော်ကားတွေ မဝေးတော့မယ့် အနာဂါတ်မှာ ပေါ်လာနိုင်ပါတယ်)
Computer Programmer – 48% risk ( နည်းပညာကုမ္ပဏီတော်တော်များများက auto coding ရေးနိုင်တဲ့ AI နည်းပညာကို တီထွင်နေကြသလို Google’s Deepmind research program ကနေ ပေါ်ထွက်လာတဲ့ Alpha Go လို AI တွေလည်း ရှိနေပါပြီ)
Reporter – 11% risk
Sales manager – 1.3% risk
Teacher – 0.9% risk
ဘာလို့ Sales manager & Teacher လို အလုပ်မျိုးတွေက ရာခိုင်နှုန်း မရှိသလောက် နည်းရတာလဲ?
နည်းပညာ ဘယ်လောက်ထွန်းကားထွန်းကား စက်ရုပ်တွေဆီမှာ နွေးထွေးတဲ့ လူသားဆန်မှုကို ရရှိနိုင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ အရောင်းမန်နေဂျာနှင့် ဆရာ/မလို အလုပ်တွေဟာ လူအချင်းချင်း ဆက်ဆံပြောဆိုရတဲ့ အလုပ်ပါ။
People buy with emotions and justify with logic!
ဖောက်သည်တွေဟာ ရောင်းသူကို သဘောကျရင် (ရောင်းသူက) ကိုယ့် အခက်အခဲကို ကူညီဖြေရှင်းပေးနိုင်မယ်လို့ ယုံကြည်ရင် ဝယ်ဖို့ရာခိုင်နှုန်းများပါတယ်။
ဒီတော့ နည်းပညာဘယ်လောက်တိုးတက်တိုးတက် အရောင်းသမားတွေ နောက်ထပ် ၁၅နှစ်/၂၀နှစ်လောက် ဒူးနန့်နေထိုင်ပါကြောင်း။
Charisma ကို သိင်္ဂါမင်းဆွေမှ တစ်ဦးတည်းစတင်တည်ထောင်ခဲ့ကာ သူသည် လက်ရှိအချိန်တွင် နိုင်ငံခြား insurance firm တစ်ခုမှာ အလုပ်လုပ်ကိုင်နေပြီး Charisma ကို တစ်ဖက်တစ်လမ်းမှ တာဝန်ယူဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည်။
စိတ်ပညာကို အသုံးချပြီး အရောင်းပိုထွက်အောင်လုပ်ခြင်း
From Door-to-Door marketing to SMS marketing
ရောင်းချမှုဆိုင်ရာ လိုက်နာရမည့် အချက်များ
လစဉ် Sales Target ထိအောင် ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲ
Sale is the backbone of your business!
ဈေးလျှော့ခိုင်းတဲ့ customer တွေနဲ့ ဈေးစကား ဘယ်လိုပြောဆိုမလဲ
Being late is unprofessional!
2030 ခုနှစ်မှာ အရောင်းသမားတွေ ကြုံလာနိုင်တဲ့ စိန်ခေါ်မှုများ
It's time to buildabetter sales team to grow your business
If you need any help, please reach out to me at
+9594210 59756
Copyright © 2019.Charisma All rights reserved.Created by